Labada Manchester isha ku haaya saxiixa Halilovic iyo Vrsaljko. - Caasimada Online
Home Warar Labada Manchester isha ku haaya saxiixa Halilovic iyo Vrsaljko.
Labada Manchester isha ku haaya saxiixa Halilovic iyo Vrsaljko.
Sir Alex Ferguson ayaa shirqoolanaya bisha Janaayo ugu yaraan laba ciyaaryahan oo diirada u saaran kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City, sida uu qoray wargeyska Sportsmail.
Sportsmail ayaa ogaatay inuu gudoomiyaha Manchester United David Gill Talaadadii u duulay dalka Croatia si uu kooxda Dinamo Zagreb ugala soo hadlo saxiixa da’yarka lagu qiimeeyo 15 milyan oo ginni Alen Halilovic.
Xilli ay kooxda Ferguson dhib ku qabto daafaca, Gill ayaa sidoo kale ka hadlay wax ku saabsan 20-jirka daafaca midig Sime Vrsaljko waxaana laga yaabaa inuu qudhiisu yahay 20 milyan oo ginni waana laba heshiis oo ah ciyaartoyda waqtigaan ugu shidan Croatia.
Gill ayaa Arbacadii kusoo laabtay Manchester, wuxuuna la shiray agaasimeyaasha kooxda ka dib kulankii ay guul darradu kasoo gaartay Cluj, kalsooni ayeyna ku qabaan inay booska kala baxaan lacagaha xoogan ee City.
Ciyaaryahanka sedaxaad ee City diirada u saaran, waa qadka dhexe ee Dinamo Dinamo Mateo Kovacic, sidoo kale Gill ayaa kooxda kala hadlay. United ayaana weydiisay qiimaha xagaaga lagu heli karo laakiin waxaa la dul dhigay 10 milyan oo ginni.
Halilovic, oo 16 jir ah, ayaa horumar ka sameeyey qadka dhexe sida Luka Modric wuxuuna sidoo kale diirada u saaran yahay Real Madrid marka laga tago labada Manchester.
United ayaa xidigaan u jeesatay iyadoo deriskeeda loo sheegay hadal aysan jecleysan kaasoo ahaa inuu Agaasimaha Ispoortiga ee Dinamo Zdravko Mamic, ku yiri: “Waan arkay wararka ay saxaafadu qoreyso ee ah inay City 7 milyan ku dalbatay Alen, laakiin xittaa ma iibiso lacagtaasi lugtiisa bidix.”